Prof. Cusmaan Maxamuud Dufle oo loo dortay Xildhibaan Aqalka sare ee Hirshabeelle – STAR FM SOMALIA
Prof. Cusmaan Maxamuud Dufle oo ah siyaasi iyo Aqoonyahan ayaa goor dhow ku guuleystay kursiga labaad ee Aqalka sare Maamul goboleedka Hirshabeelle, kaddib doorasho goor dhow ka dhacday magaalada Jowhar.
Prof. Dufle ayaa helay 85 cod, halka Musharaxa kale ee la tartamayay oo lagu magacaabo Jaamac Xuseen Xaashi uu helay 12 cod, iyadoo hal cod uu xumaaday.
Guddoomiyaha Baarlamaanka Hirshabeelle ayaa ku dhawaaqay natiijada codka doorashada Aqalka sare, waxaana uu sheegay in la doortay Kursigii labaad.
Sidoo kale Guddoomiyaha ayaa u fasaxay Xildhibaanada in la aado waqtiga Salaada iyo qado, isagoo ugu baaqay in dib la isugu soo laabto, lana soo dhameystiro kooramka.
Doorashada Aqalka sare ee ka socota xarunta maamulka Hirshabeelle ayaa ah mid aad u xasaasi ah, iyadoo illaa iyo hada labo Kursi la doortay.